Kukumba "Emerald Flow F1": nkọwa nke njirimara, ịgha mkpụrụ na nlekọta, mkpụrụ dị iche iche na ịkụ mkpụrụ nke osisi (foto) - Mkpụrụ ubi - 2019
Olee otú akụ na-eto cucumbers "Emerald Igba"
Mgbe ị na-eru nso owuwe ihe ubi nke mmiri na ọtụtụ ndị na-elekọta ubi, ajụjụ ahụ na-ebili, nke ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche na-ahọrọ. Ọ dịghị mfe ịhọrọ oke ụdị mkpụrụ dị na ahịa. N'isiokwu a, anyị ga-atụle otu n'ime cucumbers dị iche iche a na-akpọ "Emerald Flow".
Na-eto site na mkpụrụ ka seedlings n'ụlọ
Ọdịnaya na ebe
Usoro ihe ubi
Transplanting seedlings na ala
Agrotechnics na-eto eto n'ime ala
Ọnọdụ dị n'èzí
Usoro nke kụrụ mkpuru n'ala
Ala loosening na weeding
Ogwu, ọrịa na mgbochi
Nsogbu puru iche na aro
Osisi ahụ na-adọrọ mmasị na ya dị ike, na-ajụ, nnukwu epupụta, ọtụtụ ovaries na mkpụrụ osisi na-eto eto n'ihu gị anya. Ụdị cucumber a bụ akụkụ akụkụ nke akụkụ ahụ.
Ị ma? Partenocarpia bụ usoro nke ovary na mmepe nke mkpụrụ osisi na-enweghị òkè nke pollen. Nsụgharị nkịtị sitere na Grik yiri ka "nwa agbọghọ na-amaghị nwoke".
Akụkụ a nke ụdị dịgasị iche iche na-agbasawanye ohere nke ịkụ mkpụrụ: ọ dịkwa mma maka ebe nchekwa ihe nkiri na maka ịgha mkpụrụ n'ala. Ọ na-amalite nke ọma n'okpuru ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ oge, mgbe ọrụ nke ụmụ ahụhụ na-ekpo ọkụ na-esi ike. Ihe oriri a adịghị mkpa oge maka mkpụrụ ripening, ya mere mkpụrụ ya anaghị atụgharị edo edo, n'oge dum vegetative ha na-ejigide ọdịdị mara mma na uto dị mma. Na-egosi na ngwakọ nwere ike ọgụ na-arịa ọrịa, na-eyikarị cucumbers.
Chọpụta nke cucumber iche dị mma ruru eru maka kere na-emeghe n'ala.
A na-akpọ onye nnọchiteanya nke ụdị a nnukwu ibu, ebe mkpụrụ ya ruru ogo dị ukwuu maka akwụkwọ nri ndị a: ogologo dị elu ruo ọkara mita, ibu ya ruru 250 g. Site na oge ịkụ ihe ruo mgbe mkpụrụ mbụ dị njikere iri nri, ọ na-ewe nanị ọnwa 1.5. Cucumbers "Emerald Flow" nwere mkpa anụ ahụ na-arịa ọrịa tubercles.
Ebe ọ bụ na mkpụrụ pods dị na ọnọdụ embryonic, anụ ahụ dị oke, na-atọ ụtọ, na-enweghị ihe ntà dị ilu nke ilu. Ha na-adabara naanị iji mee ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na a na-ahụ iwu ndị a na-akọ n'ubi, akwụkwọ nri ndị a ga-enwe obi ụtọ na oke mkpụrụ, ruo na 5 n'arọ kwa square mita, n'oge dum.
Mgbe ị na-ahọrọ, egbula anya jiri nlezianya nyochaa ihe atụ ndị a chọrọ: ezigbo 30 ụbọchị kukumba seedlings kwesịrị inwe ike stalk, uniformly acha ọchịchịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ epupụta. Mkpụrụ osisi dị n'oge a bụ 20-25 cm, ha kwesịrị inwe 4-5 ezigbo epupụta na dayameta nke 15-18 cm Ndị dị otú ahụ seedlings dị mma n'ihi na-akụ na greenhouses ama ke ufọt ufọt April, ebe ha ngwa ngwa mgbọrọgwụ ma n'oge na-amalite na-amị mkpụrụ. Ọ bụrụ na emebieghị nkà na ụzụ nke ndị na-eto eto ma ọ bụ mgbe a naghị ahụ ọchịchị ọkụ, ihe ndị ahụ ga-abụ elongated, mkpa, na obere epupụta ga-enwe ọdịdị ude.
Lelee peculiarities nke na-eto eto ndị ọzọ ụdị nke cucumbers: "Aquarius", "Real Colonel", "Herman", "Shọsh", "April", "Merengue", "Hector F1".
Usoro mgbọrọgwụ nke osisi dị mma kwesiri ịzụlite nke ọma, ma ekwesịghị ịmalite site n'ime oghere dị n'ime ihe ndị ahụ. Nke a pụtara na ọ dị nnọọ nká karịa ka o yiri, nke pụtara na ọ ga-esiri ya ike idi ihe a ga-atụgharị. Echefukwala na ị na-esi ísì mmiri na-esi ísì, ọ bụrụ na isi ísì ụtọ, mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume na ire ere na-emetụta Ome ndị a.
N'etiti May, ma na greenhouses na n'ala a na-emeghe, ị nwekwara ike ịkụnye obere mkpụrụ ndụ iri abụọ na abụọ: ọ na-ebute elu nke 16-18 cm, o nwere 2-3 ezi epupụta, nke dị nnọọ ogologo na dayameta, ruo 15 cm. Maka akuku na ala na njedebe nke May, obere emem nke Emerald Flow n'oge di nkiti iri na abuo, ya na akwukwo akwukwo abuo, di nma. Ha na-enweghị mgbọrọgwụ na ebe ọhụrụ ahụ, jiri nlezianya na-elekọta ngwa ngwa ma na-enwe obi ụtọ na oke owuwe ihe ubi. Ekele maka nke a na-eto eto nke seedlings, ị nwere ike inye onwe gị nri ọhụrụ na mbubreyo May ruo n'oge oyi frosts.
Ọ dị mkpa! Kukumba na-emetụta nnọọ mgbanwe ọ bụla. Na okpomọkụ n'okpuru +10 Celsius uto ha na-akwụsị kpamkpam.
Ndị ọkachamara na-atụ aro ịṅa ntị n'ihe ndị na-ebute ihe ndị dị otú a: ebe ọ bụ na usoro mgbọrọgwụ ka bụ ezughị okè, ọ ka mma ịchọrọ mbadamba peat ma ọ bụ ite mmiri iji zere mmebi ya. Jiri nlezianya nyochaa epupụta site n'èzí, ma karịsịa site na n'ime ọnya site na aphids na ndị ọzọ na-eri nri. A ga - agbahapụ ihe nrịba ama nke "nhazi" site na mkpụrụ dị otú a.
Tupu ịzụlite na-eto eto dị otú ahụ na akwụkwọ nri, onye kwesịrị ikpebi ọdịdị ma ọ bụ mejupụtara nke ala nke ibé e wepụtara maka nzube a.
Ala n'elu bed cucumber kwesịrị iji nwayọọ na mmiri na-ere. O nwere ike inwe mmeghachi anya ma ọ bụ dịtụ alkaline. Iji mezuo ihe achọrọ, ị nwere ike ijigide ihe ụfọdụ ma n'oge mgbụsị akwụkwọ ma ọ bụ n'oge opupu ihe ubi:
n'oge mgbụsị akwụkwọ mgbụsị akwụkwọ nke ala ka ọ dị omimi, ọ na-atụ aro iji mụbaa njirimara na-eme nri nke ihe dị ka kilogram 5 nke nri maka mita mita ọ bụla, 25 g nke nri sitere na potassium-potassium;
ọ bụrụ na e nwekwuola acidity, gbakwunye 250 g nke wayo na onyinye a, ọ bụrụ na ike, mgbe ahụ 100-150 g nke wayo zuru.
A pụrụ idozi ala "nsogbu" site na ịhazi usoro ihe omume:
A ghaghị iji ụrọ kpụọ ájá ájá: site na 1 bọket atọ ụrọ kwesịrị ịgbakwunye mita 1 square. Nke a ga-eme ka ịchọta mmiri na ala, ma ọ bụghị cucumbers agaghị enye ezigbo owuwe ihe ubi.
Ala ikuku na-adi elu na ikuku na mmiri. Maka ịkụ na saịtị cucumbers dị mkpa ka ị mee site na 1 ruo 4 bọket kwa 1 mita mita nke ájá na compost. Ala ga-ebuwanye ibu na-emeghe ka ikuku ikuku, a ga-ezere mmiri mmiri.
Ọnọdụ ihu igwe na ọnọdụ dịgasị iche iche na-eme ka anyị nwee ike itinye aka na nkwadebe nke ala n'oge oge mgbụsị akwụkwọ. Ị nwere ike ime nke a na oge opupu ihe ubi. Mgbe na-egwu ala na saịtị maka akuku cucumbers, ọ dị mkpa ịkwụnye 3 n'arọ nke humus ma ọ bụ compost na 50 g nke mgbagwoju ịnweta nri kwa 1 square mita.
Ndị a na akwụkwọ nri na-ahụ n'anya nke ọma ebe anwụ. Ọ bụ ezie na ọdịda Emerald dịgasị iche iche na-echekwa na ọ dị mma na ncha, nke a adịghị emetụta mkpụrụ ya. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na e chebe ihe ndina ahụ site na mmiri oyi dị n'ebe ugwu site n'ụdị ụlọ, usoro, ma ọ bụ onye ọrụ ubi nke a kụrụ n'akụkụ ebe ugwu nke saịtị ahụ: ọka ma ọ bụ ọka. Table nke ndekota nke osisi na ogige Dị ka ọ bụla ọzọ ikpe, ememe ngbanwe nke ihe ọkụkụ, a na-atụ aro ka a gbanwee ihe ọkụkụ.
Chọpụta ihe ị nwere ike ịkụ n'ubi ahụ.
Ezi ndị agbata obi:
cucumbers anyị nwere mmetụta dị ukwuu na ala ebe mbụ na kọlịflawa, tomato, peas, beets, poteto na-etolite;
eyịm na galik dị ka ndị na-aga n'ihu bụ nanị ihe dị mma, ka ha na-ekpochapu ma na-eme ka ala ha jupụta n'ụbụrụ;
Gburugburu nke dị iche iche na akwụkwọ nri na ndị na-enyere okooko osisi na-anabata nwayọọ
Ndị agbata obi ọjọọ:
ọ gaghị ekwe omume ịkọ cucumbers mgbe kabeeji nke oge dịgasị iche iche na carrots, ụdị nnwale a na-arịa ọrịa na mmepe ngwa ngwa;
etinye cucumbers n'akụkụ ihe ndina na poteto adịghị anabata.
Seedlings nke a dịgasị iche iche nwere ike kụrụ greenhouses, n'okpuru okpomọkụ akara.
Ọ bụrụ na ụlọ nkwonkwo anaghị edozi ọkụ, mgbe ahụ, ọ dị mkpa ilekwasị anya n 'ikuku nke ikuku na ala, n'otu n'otu. Mgbe egwu nke oge oyi na-aga n'ihu, nke a bụ oge ahụ site n'afọ nke abụọ nke ọnwa Mee, ikuku n'ime ụlọ na-adịkwa elu ruo + 17 ... +19 ogo, ala dịkwa elu ruo +15 ogo, mgbe ahụ, osisi ndị na-eto eto ga-adị mma n'ọnọdụ dị otú a.
Ọ bụrụ na griin haus dị ọkụ ọzọ, mgbe ahụ, ejikọta ya na ọnọdụ ihu igwe adịghị mkpa, a pụkwara ịkụ mkpụrụ osisi ahụ, na-elekwasị anya na ntozu ya. Maka ezigbo oge na-eto eto, ị nwere ike ilekọta ọkụ ahụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ìhè ọkụ adịghị ezu. Ọ bụ ezie na ụdị cucumber a bụ ndo-na-edozi ahụ, ma, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara ọchịchị ahụ ọkụ, ọ gaghị akpata nsogbu dị njọ. Ma, ọ ka mma maka ahụike na uto nke osisi na a na-akwanyere iwu na iwu nile nke ịgha mkpụrụ.
Kwesịrị ekwesị na-eto eto nke na-eto eto na osisi na-etinye ntọala maka ọdịnihu ọgaranya owuwe ihe ubi. Ọ bụ naanị ihe dị mkpa iji hụ ihe ndị ahụ: ala n'okpuru bushes ekwesịghị ịbụ nkụ, gbawara, ma ọ bụ mmiri, karịsịa na mmiri na-asọ oyi.
Ghọta ụzọ niile nke cucumbers na-eto eto na griin ha.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịkwadebe maka ịkụ kukumba bụ usoro ịmịpụ mmiri na mmiri na ime ụlọ. Ọ bụrụ na nke a adịghị, mgbe ahụ ọ ga-ezuru mmiri na osisi site na ịme mmiri nwere ike iji ihe ịgba. Ebe ọ bụ na ihe ọkụkụ a na-enye nnukwu isi n'abalị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịme mmiri n'anyasị, mgbe okpomọkụ na-ada, na mmiri na-ekpo ọkụ n'ụbọchị.
Ọ dị mkpa! A pụghị ịwụpụ ala na-ekpo ọkụ n'otu mgbe: mmiri mmiri nke mmiri pụrụ imebi ire ere na mgbọrọgwụ na ị ga-eme, nke n'onwe ya nwere ike iduga ọnwụ nke osisi ahụ.
Iji họrọ usoro mmiri na-edozi ahụ kwesịrị ekwesị, onye kwesịrị ịṅa ntị n'eziokwu ahụ na na ihu igwe ọkụ, a na-eme usoro a kwa ụbọchị, na mgbe mmiri ozuzo na-ezo mmiri ka mmiri na-eme ka ala ahụ kpoo.
Iji gbochie mgbọrọgwụ nke osisi ahụ ka ọ ghara ịbịaru mgbe ị na-atụtụ ala nke ala mmiri, ọ ga-abụ mgbe nile ma jiri nlezianya hapụ ya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịkwanye ngwakọta potassium dị n'okpuru bushes. Iji mepụta ọnọdụ dị jụụ na griin haus, nnukwu onye kukumba kwesịrị ịmalite ikuku n'ime ụlọ ahụ ka nrụpụta griinụ ghara ịkpata mmepe bacteria pathogenic.
Ọ bụrụ na ị nwere ohere na ọchịchọ, ọ ka mma ịmalite ịmalite mkpụrụ nke cucumbers ndị dị ịtụnanya na nke ha. Iji mezuo germination magburu onwe ya nke akwukwo nri n'ubi, iji nye aka iguzogide oria na ihe ojoo nke gburugburu ebe obibi, iji kwue ugwo oru ha na oke ihe ubi, odi nkpa iji mezue nkpuru na ala nke akuku maka akwukwo nri.
N'ụlọ ahịa ndị pụrụ iche nwere ike inye ọgwụ dị iche iche na nkwụsị maka ọgwụgwọ nke mkpụrụ na ala. N'ime ngwa ha, ebumnuche abụọ bụ ndị a na-achụ: disinfection and stimulation growth. A na-edozi ha site na potassium permanganate na hydrogen peroxide. Mkpụrụ nke Emerald Flow, n'agbanyeghị njigbu ha, agaghị enwe nsogbu ọ bụla na oge nkwadebe. Ịtụle nlezianya nyochaa ihe ọkụkụ na-ekpughe ma è nwere ihe dị n'elu ya ma ọ bụ. Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, mgbe ahụ, ị ​​pụghị ịmịkọrọ mkpụrụ osisi cucumber. Ọ bụrụ na enweghi mkpuchi, enweghi ike izere ụdị ọrụ a. Awa atọ zuru ezu iji debe ha na ngwọta nke a: maka 100 ml mmiri tinye 1 teaspoon nke perogenide hydrogen.
Mmiri jupụtara na ikuku oxygen na-akpali mkpụrụ nke ọka ma na-emepụta disinfection ọzọ. Mgbe ọgwụgwọ a gasịrị, a na-akụkọta ihe ndị a na-agha mkpụrụ maka ala, ma ọ bụrụ na a ga-akụ ya n'ọhịa mgbe ụfọdụ. Ọ bụrụ na a na-agha mkpụrụ na seedlings, mgbe ahụ, ọ ga-adị mma ịme ya ozugbo ị tụsịrị ya. A na-ererịrị mkpụrụ osisi ahụ na F1 akara ma na-edozi ahụ, yabụ na nke a, ị kwesịrị ịkpachara anya n'ịkwadebe ala.
Ngwakọta ala maka ịkụ mkpụrụ osisi kukumba kwesịrị ịbụ ìhè, na-agwụ ike, na-edozi ahụ. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịzụta ala a kwadoro na nkwakọba ihe na ụlọ ahịa pụrụ iche nke na-emezu ihe ndị a, ị ga-akwadebe ya n'onwe gị. Iji mee nke a, ọ bụ iji jikọta akụkụ abụọ nke peat na humus na 1 nke rotded sawdust. Iji 10 lita a ngwakọta kwesịrị kwukwara 1 iko osisi uyi na 1 teaspoon nke urea, superphosphate na potassium sulfate.
Iji meziwanye ihe mmiri drainage, ikuku nke ikuku, ọ na-atụ aro ka ị gbakwunye ihe ndị dị na gburugburu ebe obibi na-eme ka ala ala - agroperlite ma ọ bụ vermiculite, ụrọ gbasaa ma ọ bụ ụfụfụ a gwakọtara. Vermiculite for seedlings Ma na ihe ọ bụla, tupu ịgha mkpụrụ nke a kwadebere, ọ na-atụ aro ka mmiri gbanye mmiri na ngwọta na-adịghị ike nke potassium permanganate ma ọ bụ diluted na 3 tablespoons nke hydrogen peroxide na 10 lita mmiri. N'ụzọ dị otú a, a na-eme ka ịdị ọcha nke ala mezuo, ya mere nchebe nke seedlings n'ọdịnihu site na pests na ọrịa ndị na-egbu egbu.
Iji gbochie mmerụ ahụ na-eto eto kukumba na-epulite n'oge a na-atụgharị ya na griin ha ma ọ bụ na-emeghe ala, ọ ka mma iji kpoo ma ọ bụ peat tablets maka na-eto eto "emerald": a na-akụ ha na osisi na-enweghị ihe na-esi na ya pụta, ala ala.
Ka seedlings na-eto ma na-eto eto, ọ dị gị mkpa ilekọta ikike ziri ezi. Anyị na-adụ ọdụ ka ị chọpụta ma ị ga-eto eto na mbadamba peat.
Site na ntancha na nhichachaa, mkpụrụ nke Emerald Stream na-amalitekarị ịmalite.
Jiri nlezianya, ka ị ghara imebi mkpụrụ osisi ahụ, gbanye otu ọka n'ime seedlings ndị a kwadebere na ájá dị omimi ruo 1.5-2 cm, fesaa ya na ngwakọta ala.
Ruo mgbe oge pulitere na-apụta n'elu, a na-atụ aro ka ị nọgide na-enwe okpomọkụ na elu nke +25 degrees. Iji mepụta mmetụta griin haus, i nwere ike ikpuchi ite ndị ahụ na iko ma ọ bụ akpa plastik.
Ozugbo kukumba na-apụta ìhè, a ghaghị mepee tankị ahụ ma belata okpomọkụ maka seedlings kwesịrị ịdị na-agbada ruo +19 ogo.
Ị ma? Ihe kachasị mkpa nke kukumba bụ ihe pụrụ iche tartronic acid. Mmiri a na-egbochi mmetụta nke carbohydrates nke na-abanye n'ahụ anyị n'oge nri, si otú ahụ na-egbochi ọdịdị nke abụba. Ọ bụ ya mere eji kukumba mee ihe maka nri.
Iji hụ na ọganihu kachasị mma nke omenala cucumber, ọ dị mkpa itinye ya na windo ka o wee nwee ọnọdụ ọkụ. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume iji windo windo ma ọ bụ ohere gburugburu ha, mgbe ahụ, ị ​​ga-etinye mgbakwunye ọkụ ọzọ maka seedlings. Ugboro ole na ole ịgbara mmiri na-adabere ọnụego nke ihicha ala n'ime ite. Maka na osisi, ma mmiri ma mmiri na ụkọ ya dị ize ndụ, n'ihi na usoro mgbọrọgwụ ka na-ezughị okè, ọ na-esikwa ike iji gbochie oke ókè ahụ, ya mere, ịgbara kwesịrị ịdị oke oke na oge. Iji kwadebe mkpụrụ osisi maka ịkụ ma ọ bụ na griin haus, ma ọ bụ n'ala ndị na-emeghe, ndị ọkachamara na-enye ndụmọdụ banyere ụbọchị 10 tupu arụ ọrụ ahụ amalite ya. Iji mee nke a, ọ dị mkpa maka awa ole na ole iji buru igbe na-akụ ihe na n'okporo ámá ma ọ bụ na mbara ihu. Ọ dị mma na ọ dịkarịa ala, enwere ọmụmụ ihe mbụ na nwayọọ na ihu igwe ọkụ. Ọ bụrụ na ihu igwe adịghị adaba, mgbe ahụ ị nwere ike ịmepụta ụdị ndo site na mmiri ma ọ bụ mmiri ozuzo. N'elu mbara ihu ma ọ bụ n'elu ụlọ nke ụlọ ahụ, edoziwo nke a n'ụzọ dị mfe: enwere ebe obibi, na ịnweta "n'okporo ámá" ikuku na okpomọkụ, kwa.
Maka osisi a kụrụ na seedlings ka ọ bụrụ ngwa ngwa na-enweghị mgbọrọgwụ na-adịgide adịgide, ọ bụ ihe na-adịghị anakwere ịbanye ngwa ngwa na-enweghị ichere ala iji kpoo + 8 ... + ogo 10 na ikuku ruo 15 degrees. Ọ bụrụ na a kụrụ cucumbers n'ala na-emeghe, mgbe ahụ, ị ​​ga-elekwasị anya na oge mgbe ememe May gasịrị, mgbe egwu nke mmiri mmiri na-agafe. Ọ bụrụ na a na-eme usoro a na griin haus, na ọbụna na iwe ọkụ, mgbe ahụ ka ejiri aka ọnọdụ ihu igwe dị nnọọ mma.
Ọ dị mkpa! Ọ gaghị ekwe omume ịmebe mkpụrụ osisi ahụ n'ime ihe karịrị ụbọchị 30, n'ihi na mgbe oge a gasịrị, ọ ga-esiri ike imeghachi omume n'ụzọ dịgasị iche iche ma sie ike ịmekọrịta ọnọdụ ndụ ọhụrụ.
N'elu akwa ndị a na-akwagharị, na-eji aka nke eriri agbatị na-agbatị, ndị obere dị njikere, nwee omimi nke dị elu nke tank ahụ ma ọ bụ ụrọ na-acha gburugburu osisi, oghere. Ebe ọ bụ na ngwakọ a ka nkewa dịka ọkara, ọdịiche dị n'agbata oghere kwesịrị ịbụ ihe karịrị 30-35 cm, na n'etiti ahịrị osisi ndị a na nnukwu epupụta - ọ bụghị ihe na-erughị ọkara mita.
Mgbe a kwadebere olulu mmiri ahụ, ha ga-agbanye mmiri, ọ ga-ekwe omume na mgbakwunye nke hydrogen peroxide, ma ọ bụrụ na emeghị usoro a n'ihu oge, na ọnụego 0.8 l na nke ọma ọ bụla.
Mgbe ahụ, a na-etinye ite ma ọ bụ clod earthen nke nwere ome na ya, nke mere na ọnụ ọnụ ha dabara na olulu ahụ, ma fesa ya na ngwakọta ụrọ dị njikere.
Mgbe akuku, a ghaghi igba nnukwu cucumbers na mmiri ozo n'ime onu ogugu abuo nke ohia.
Iji gbochie ihicha nke ala na nchedo site na ata ahịrị, ọ ka mma ịkụ ya na kọlụm, ma ọ bụ na-acha odo odo, ma ọ bụ nwa agrofibre.
Ke akpa 3-4 ụbọchị mgbe akuku, seedlings kwesịrị mmiri n'ụba. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ime nke a na mgbede, na-ezere mmiri ọzọ na epupụta, nke nwere ike ịkpalite mmemme nke nsogbu na-adịghị mma na mmepe nke osisi ahụ.
Akwukwo ndi ozo di iche iche "Emerald flow" nwere ike ibu ihe di iche iche di iche iche di iche iche n'onu ha. Na seedlings, na ịgha mkpụrụ na ala, mgbe ị na-akwanyere nlekọta dị mkpa, egosiwo na ị ga-eguzogide ọgwụ, ọrịa kpụ ọkụ n'ọnụ na mkpụrụ elu. Ọ bụrụ na usoro rassadny ahụ a kọwara n'elu anaghị anabata ya maka ihe ọ bụla, mgbe ahụ, ndị na-eto eto na-eri ihe ekwesịghị iwe. A na-eji ụdị dịgasị iche iche a nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị percent germination nke osisi mgbe a kụrụ ya n'ala.
N'agbanyeghị ụdị ọdịdị nke ngwakọ a, ọ dịghị achọ ihe ọ bụla pụrụ iche iji dozie, mmepe na mmezi. Nakwa ihe ịga nke ọma, cucumbers ndị a na-eto ma na-amị mkpụrụ na greenhouses na n'ọhịa. Ihe kachasị mkpa maka ndozi ha n'èzí ụlọ ahụ na-eche banyere okpomọkụ nke ikuku na ala. A na-akụ mkpụrụ nke ihe ubi a mgbe, n'oge 2-3 ụbọchị, okpomọkụ okpomọkụ nke ala bụ ọ dịkarịa ala +12 ogo, na ikuku n'oge ehihie bụ, karị, +20 degrees.
Ọ bara uru ịmara ihe mere o ji dị mkpa ka iodine nwee cucumbers na otú e kwesịrị isi tinye ya n'ọrụ n'ụzọ dị mma n'ọhịa na griin ha.
Ọ bụrụ na, mgbe ị na-akụ mkpuru osisi na greenhouses, ọ ga-ekwe omume ịghara itinye aka na ọnọdụ ihu igwe, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọkụkụ ọzọ, mgbe ahụ, mmepe na uto na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi na-adabere kpam kpam na okpomọkụ kwa ụbọchị na ogo ala na-ekpo ọkụ. Cucumbers hụrụ mma-udo ebe, ma nke a ngwakọ bụ kpamkpam nwayọọ ma nwekwara ike na-arụsi ọrụ ike na shading.
Ịgha mkpụrụ na-emekarị n'ọkara nke abụọ nke Eprel ma ọ bụ mmalite May.
N'elu mmiri, ma ọ bụghị ala a na-ejupụtaghị, a na-eme ka mmiri dịkwuo 3 cm, osisi dị n'ebe dị anya nke 15-20 cm ma jiri nlezianya, ka ọ ghara imebi sprouted osisi, ha jupụtara na ngwakọta potassium. Ọ bụghị ihe dị mkpa. A na-echekwa ebe dị anya n'agbata oghere 70.
Iji gbochie ihicha nke ala ma chekwaa ihe isi iyi sitere na anụ ọhịa ahụ a na-atụ aro ya ka ọ gbanye akwa ahụ ma ọ bụ ihe nkedo ma ọ bụ kichin. Iji nye ọnọdụ kachasị mma maka ibu, ebe a na-ekesa nwere ike kpuchie ya na ihe nkiri. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume iji chebe ihe ọkụkụ site na mgbanwe mmiri na-atụghị anya ya ma ọ bụ mmiri mmiri.
VIDIO: MGBE NDỊ NA-AHỤ N'ỤWA Nke a dịgasị iche iche bụ ụdị mkpụrụ osisi salad dị elu ma na-enwekarị 2-3 osisi iji nye ezinụlọ abụọ mkpụrụ osisi ọhụrụ ma dị ụtọ n'oge oge. Ya mere, ọ bụrụ na ị bughi ịgha mkpụrụ na ahịa, mgbe ahụ, ị ​​ga-eche banyere mkpa ịgha mkpụrụ buru ibu na ihe ndị a.
Ịkụzi nri dị mma ọtụtụ ugboro na-eme ka ohere ịnweta owuwe ihe ubi dị ukwuu. Mgbe a kụrụ osisi na mmiri, ọ ga-ezuru ha mmiri otu ugboro n'izu na mmiri na okpomọkụ. Ọ dị mma ịme ya site na ịme mmiri ma ọ bụ sopụ na nkedo na-enweghị nrụgide siri ike. Egbula imeju akwa na bọket. Mmiri dị elu na-eduga na compaction nke ala ma nwee ike ịkpata nsogbu fungal. Ọbụna na nguzogide nke ngwakọ a na ọrịa, ọnọdụ a nwere ike imetụta mmepe ha.
Mgbe ụfọdụ, a na-eji oge okpomọkụ eme ihe site na okpomọkụ. O kwere omume izere ihicha ala site na mmiri kwa ụbọchị na iji ihe eji eme ihe. Ngwunye zuru oke na-agbanye mgbọrọgwụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịzụta mbipụta ụlọ ọrụ, ị nwere ike ịme onwe gị, jiri karama plastik.
Anyị na-atụ aro ka ị mụta otu esi eji aka gị aka ka ị ghara iji ọgwụ aka.
Drip ogbugba mmiri n'ubi A na-eme ka kọnumba kacha mma na mgbedenke mere na mmiri nke mmiri na epupụta adịghị agbanwe n'okpuru nduzi nke ìhè anyanwụ na anya anya ma ghara iduga n'ọkụ nke green uka. N'igwe ọkụ na-ekpo ọkụ, iji gbochie ikpo oke ọkụ nke osisi, ọ dị mma iji mmiri fesa ha mmiri. Otu ụzọ ahụ na-egbochi ájá nke ala n'okpuru bushes. I nwekwara ike ime ka mmiri dị n'etiti ahịrị ma kwe ka mmiri banye na ha ka ha wee ghara imerụ mgbọrọgwụ na akwụkwọ. Ọ bụrụ na ihu igwe na ezo, ọnụ ọgụgụ mmiri na-ebelata ọtụtụ ugboro: ugboro ole ha na-adabere na ọnọdụ ala. Mmiri wetting nke ọma kwesịrị ịdịkarịa 10 cm.
Ọ dị mkpa! Ọchịchị na-eme ka ndị mmadụ ghara ịkwa iko. Nke a na-eme ka osisi ghara imebi ma na-eme ka nlọghachị na-arịwanye elu, yana mmepe nke ọrịa dị iche iche.
Na ọkụ ma ọ bụ na-ekpo ọkụ ihu igwe, a na-akọrọ akọrọ ngwa ngwa n'elu ala mmiri. Ọ na-egbochi mgbanwe ikuku kwesịrị ekwesị, na mgbọrọgwụ kukumba enweghị oxygen. Ya mere, ọ dị mkpa ịmepụta ala mgbe nile na akwa kukumba. Usoro mgbọrọgwụ dị nnọọ nso, n'ihi ya, ọ kachasị mma igbochi mmegharị nke ọkụ ka ị ghara imerụ ahụ. Anyị ekwesịghị ịmepụta ahịhịa na ala dị ala, n'ihi na ọ ga-eduga na ịmepụta lumps, na ikpughe nke mgbọrọgwụ. Mgbe ọ na-anọghị ya n'ụlọ, mgbe ị gụchara mmiri na ịtọpụ ala, ebe a nwere ike ịkụnye ya na ala akọrọ ma ọ bụ ngwakọta nke ihe oriri. Nke a ga-egbochi nsị ngwa ngwa nke ala.
A na-ebibi oge a na-ata ahịhịa. Ị nwere ike iji agrofibre ma ọ bụ ihe mkpuchi ndị ọzọ iji belata ata na-eto eto n'ubi. A naghị anakwere ọgwụ ọgwụ ọjọọ.
Iji mee ka mkpụrụ osisi a dịgasị iche iche, ọ dị mkpa ịmalite ịmepụta shrub n'ime otu isi ihe dị na steepụ n'oge.
Mgbe akwụkwọ nke isii gachara, a na-ewepụ ovaries niile na ovchildren, nke na-eto eto na leafils.
Na-esote, hapụ otu ovary, na-apụnara nwa stepchildren.
Mgbe 2-3 epupụta hapụ ovary na stepchild, nke tuo na akwukwo mbụ, na-ahapụ ya na ovary.
Ebe ọ bụ na nke a bụ akụkụ parthenocarpic dịgasị iche iche, a na-akpụ ovaries na bunches, mgbe mgbe osisi ahụ enweghị ike zuru ezu iji zụọ ha. Ya mere, iji ghara ịhụ edozi na ịwụfu nke ovary, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na-ewepụ ya kpam kpam. Site na mkpali dị otú ahụ nke uto nke Ome mpụta, ọ ga-ekwe omume ibudata ma mkpụrụ nke ihe ọkụkụ na usoro nke ịkụ mkpụrụ a.
Kukumba nke ụdị dịgasị iche iche na-abụ ndị na-ajụ ihe dị mkpa ma dị mkpa ka e kekọta ha. Ọtụtụ mgbe, a na-akụ ha na nsu nke nkedo njikọ-njikọ, nke na-aghọ nkwado aka. Ọ dị mkpa naanị ịmịnye ihe otiti site na sel ya ma ọ bụ kee ya.
Na akwa ma ọ bụ na greenhouses ọ kachasị mma iji trellis stable. Iji ghara imerụ osisi ahụ, ọ ka mma ịwụnye trellis n'oge, dịka ọmụmaatụ, mgbe ọdịdị nke 2-3 ezigbo epupụta. Ọ ga-enye nkwụsi ike nke bushes, chebe mkpụrụ osisi site na mmetọ na nrụrụ.
O nwere ike ịbụ na ị ga-enwe mmasị ịmara ihe ndị dị na okporo ahịhịa nke cucumbers na otú e si arụnye ya n'ụzọ ziri ezi.
Site n'ile osisi ahụ anya, ị nwere ike ikpebi ihe nri ndị ọ na-enweghị:
Ọ bụrụ na ị ga-adị ọcha, nke dị mkpa, na-apụ ngwa ngwa, mkpụrụ ya anaghị edekwa ya na nha anya, mgbe ahụ, ezughị nitrogen na ala.
Ọ bụrụ na mkpụrụ osisi ahụ dị nko, na ala ala na-acha uhie uhie na nkụ, mgbe ahụ, ezughị potassium. Ime ọgwụ ndị kwesịrị ekwesị nwere ike iwepụ ihe a.
Iji hụ na ọganihu na-arụsi ọrụ ike, mmepe ahụike na owuwe ihe ubi bara ụba, Emerald Flow na-achọ ka ndị ọzọ na-emepụta fertilizers na nri fatịlaịza. Nke a nwere ike ịbụ humus, yabasị nku ma ọ bụ ugbo, ihe ngwọta dabeere na infusion nke anụ ọkụkọ. Ha kwesịrị ime ugboro atọ kwa oge:
mgbe ọdịdị nke mpempe akwụkwọ mbụ ahụ dị;
mgbe ụbọchị 21 gasịrị;
tupu enweghi nsogbu.
Iji mepụta utịp dị ukwuu nke inye nri, ọ ka mma ịnọ na mgbede, na-eji mmiri ọkụ na-ekpuchi ekpuchi, na-ezere kọntaktị na ngwọta na-acha akwụkwọ ndụ.
Ihe dị iche iche dị na ngwakọ dị iche iche na-eguzogide ọgwụ ndị dị ka powderde mildew na cladosporiosis nke zuru ebe nile n'etiti cucumbers. Ma, a ghaghị iji gbochie mgbochi:
Jiri nlezianya hụ ọnọdụ okpomọkụ na mmiri mmiri, gbanye ala n'oge, wepụ ata, gbanye mgbọrọgwụ n'ala n'ime ala.
E kwesịrị ịchebe akwa ahụ n'oge ọgụ nke anụ ọhịa, anụ ọhịa. N'ebe ndị a na-emepe emepe ka ị nwee ike iwepụ ụmụ ahụhụ, ị ​​nwere ike ịkụ marigolds na calendula, nri nchekwa na-esote akwụkwọ nri.
Na-enyocha akwụkwọ na ị ga-ahụ mgbe nile, ma site n'èzí na n'ime, ka oge na-aga ịchọpụta egwu nke infestation site na aphids.
Maka ọgwụgwọ na mgbochi ọrịa ndị ọrịa, gbanye epupụta na ngwọta nke 1 tablespoon nke hydrogen peroxide na 40 tụlee nke ayodiin kwa 10 lita mmiri. A na-eme ka nkwonkwo osisi ahụ sie ike, ikuku oxygenation na mbibi nke usoro ahụ ike.
Mkpụrụ nke a ngwakọ ga-egbute ka ha tozuru okè. Ọ dịghị mkpa ka ichere maka ogo kachasị ha karịa 0,5 m. Kuki cucumber dị ụtọ ma na-edozi ahụ nke ruru 25-30 cm. Ha anaghị adabara nchekwa nchekwa oge, ha na-adị ngwa ngwa. Ụdị dịgasị iche iche bụ nke ọma maka salads. Ị nwere ike ijide ha ruo ụbọchị 2-3, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na friji na akpa. Saa ha ozugbo tupu o jiri ya.
Ị ma? Napoleon bụ okpukpu klas nke dị mma nke kwupụtara ụgwọ ọrụ nye ndị ga-enwe ike ịbịakwute ụzọ iji mee ka ihe oriri a dịrị ọhụrụ n'oge hikes. Onu ogugu a bu $ 250,000, mana, o di nwute, enweghi ya.
Mgbe ufodu, nsogbu na - ebili mgbe akwukwo na nkpuru na - acha odo odo wee daa n'ihi ihe doro anya. Isi ihe kpatara ihe ndị a nwere ike ịbụ:
mmebi nke okpomọkụ, ọnọdụ ọkụ;
enweghị ma ọ bụ mmiri mmiri;
enweghị ihe oriri na-edozi ahụ;
akwa mkpụrụ nke a dịgasị iche iche.
Iji zere nsogbu ndị dị otú ahụ, ọ dị mkpa iji hụ na ị na-ahụ na nkà na ụzụ nke na-eto eto dịgasị iche iche cucumbers "Emerald Flow".
Ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ọkwa dị elu na klas na-eto eto na-eto eto, mgbe ahụ ị kwesịrị ịṅa ntị na ihe ọmụma abụọ, na ọmụmụ banyere ahụmahụ nke ndị ọrụ ugbo ndị ọzọ, na ntinye ịkwadebe, na ịgha mkpụrụ maka ịgha mkpụrụ ma ọ bụ nhọrọ nke seedlings. Mgbalị gị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ dị elu.
Nkwadebe nke vitamin maka oyi. Esi echekwa pasili n'ụlọ?
Otu esi choputa philodendron maka ulo gi: aha na foto nke isi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Olee otú akụ na-eto cucumbers "Emerald Igba"